कोरोना कहरपछि आयुर्वेदिक औषधोपचारमा आकर्षण
सुर्खेत । कर्णालीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि आयुर्वेदिक औषधितर्फ आकर्षण बढेको छ । शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढेको हो । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आयुर्वेदिक औषधोपचार सेवा लिनेहरू बढेको प्रदेश आयुर्वेदिक औषधालय सुर्खेतले बताएको छ ।
‘जडीबुटीबाट बनेका औषधिको सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने भएकाले यसको यसतर्फ आकर्षण बढेको हो’ प्रदेश आयुर्वेदिक औषधालय व्यवस्थापन समिति सुर्खेतका अध्यक्ष अध्यक्ष विनोद ढकालले भने । औषधालयबाट अहिले दैनिक एक सय जनासम्मले औषधि लिने गरेको तथ्यांक छ । शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन विशेषगरी गुर्जोको प्रयोग गर्नेहरू बढेको औषधालयका प्रमुख डा. शंकरप्रसाद रिजालले बताए । औषधालयमा हालसम्म करीब ३ हजार जनाले गुर्जो प्रयोग गरेको जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार औषधालयबाट सेवाग्राहीले हिमाली जडीबुटी, गुर्जो, तुलसीलगायत लैजाने गरेका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण आयुर्वेदिक औषधितर्फ आकर्षण बढेको भन्दै औषधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ढकालले सरकारले अब आयुर्वेदिक चिकित्सालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य सेवाको अभाव हुँदा सेवा थप प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार औषधालयले गरीब, असहाय, अपांगता भएका अल्पसंख्यकहरूबाट कुनै पनि शुल्क नलिई सेवा दिइरहेको छ ।
अहिले औषधालयमा भिडियो एक्सरे र ल्याब सेवा सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि औषधालयमा भिडियो एक्सरे र ल्याब नहँुदा महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालहरूबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । ‘१८ लाख लागतमा एक्सरे मेशिन शुरू भएपछि सेवा सहज भएको छ,’ औषधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अत्याधुनिक डिजिटल ल्याब जडान गरी अन्य सरकारी अस्पतालको सस्तो मूल्यमा सेवा दिइरहेका छौं ।’
पछिल्लो समय औषधालयबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढ्न थालेको छ । तर भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति अभाव हुँदा सेवा पु¥याउन कठिन भएको छ । अहिले औषधालयले ओपीडी, पञ्चकर्मा, क्षारसूत्र, शंख प्रक्षालन, फिजियोथेरापी लगायत सेवा दिइरहेको छ । कर्णालीको जडीबुटी प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनका लागि औषधालयको स्तरोन्नति गरी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बनाउने योजना रहेको डा. रिजालले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको माग गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अन्य अस्पताललाई लाखाैं रकम दिए पनि आयुर्वेदक औषधालयलाई रकम उपलब्ध गराउन सकेन ।’ जनशक्ति र स्रोतसाधन अभावले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध जडीबुटीको संकलन, प्रशोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आयुर्वेदिक औषधि भरपर्दो र स्थानीयको रोजाइमा परेको भए पनि सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा समस्या भएको छ ।